A1nepal.comशिव परियारका गज्जब फ्यान : युवतीले हात काटेर नाम लेखिन् ! - A1nepal.com
शिव परियारका गज्जब फ्यान : युवतीले हात काटेर नाम लेखिन् !
२०७४ कार्तिक २३, मा प्रकाशित
लोकगीत, आधुनिक गीत, शास्त्रीय संगीत हुँदै पछिल्लो समय पप गायनमा समेत जमेका चर्चित गायक हुन शिव परियार । उनका हरेक विधाका गीतले बजार पिटे । देशविदेशमा हुने कन्सर्टमा सबैभन्दा धेरै डिमान्ड हुने गायक पनि हुन् उनी । यतिखेर उनी अमेरिकाका विभिन्न सहरका कन्सर्टमा व्यस्त छन् । अमेरिका उड्नुअघि शिवसँग प्रवीण बुढाथोकीले गरेको फ्यान संवाद :
केही वर्षअघि एकजना युवतीको फेसबुकमा म्यासेज देखेँ । ‘मलाई तपाईंका गीत एकदमै मनपर्छ’ भनेर गीतका मात्रै कुरा थिए । त्यसपछिका म्यासेजमा पनि गीतबारे मात्रै कुरा गर्थिन् । मलाई लाग्छ उनी इन्डियन र नेपाली फ्यामिलीको मिक्स्ड हुन् । संगीतमा रुचि राख्ने फ्यान सम्झेर उनलाई रेस्पोन्स दिन्थेँ । हामी संगीतका कुरा धेरै गथ्र्यौँ । नियमितजस्तै कुरा हुन्थ्यो, केही समय मैले उनको म्यासेज नै पढिनँ ।
एक दिन अचानक फेसबुकमा उनले पठाएको फोटो देखेँ ।
केही समय फेरि उनका म्यासेजहरू पढिनँ । फेरि अर्को फोटो राखेर उनको म्यासेज आएको देखेँ । ‘ठूलो बुवाले देख्नुभयो अनि मेटाएँ,’ यसपटक शिव लेखेको ठाउँमा ठाडो काटेको हातको फोटो थियो । मलाई डर लाग्यो, मेन्टल्ली प्रेसर पनि भयो । भोलि तलमाथि केही घटना भयो भने शिव परियारको कारणले भनेर दोष आउँछ । त्यसपछि म उनीसँग झन् डिस्ट्यान्समा भएँ । उनीसँग कुरै गर्न छाडिदिएँ । एक हप्ताअघि मात्र उनको म्यासेज पढेको थिएँ, ‘तपाईं नडराउनुस् ।’
प्रवीण बुढाथोकी, – नयाँ पत्रिका दैनिकबाट